JIGJIGA: Muxuu Ku Saabsan Yahay Mudaharaad Salmi Ah Oo Laga Qaban-qaabinayo MMJ? - Jigjiga Online
HomeSomalidaJIGJIGA: Muxuu Ku Saabsan Yahay Mudaharaad Salmi Ah Oo Laga Qaban-qaabinayo MMJ?
Jigjiga (JigjigaOnline) – Magaalada Jigjiga ee caasimadda Dawladda Deegaanka Soomaalida, waxa laga maqlayaa hadal-hayn badan oo la xidhiidha mudaharaad salmi ah oo ay dalbadeen odayaasha dhaqanka, kaas oo ay ka qayb-geli lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan caasimadda DDS.
Odayaasha hormoodka u ah deegaanka ayaa la sheegay inay laamaha ammaanka ka dalbadeen in loo ogolaado in mudaharaad salmi ah ay ka sameeyaan Jigjiga, waxaanay ballan-qaadeen in wax rabshado ah aanay dhici doonin inta uu socdo mudaharaadku.
Waraaqaha ay odayaashu u gudbiyeen laamaha ammaanka ayay ku caddeeyeen ujeeddada ay ka leeyihiin iskusoo-baxa.
Dalabka mudaharaadkan oo ku soo beegmay xilli xiisad siyaasadeed ka taagan tahay Deegaanka, ayaa waxa la rumaysan yahay in ujeeddadiisu tahay inay kusoo bandhigaan tabashooyin badan oo ay ka qabaan xukuumadda madaxweyne Mustafe Cagjar oo lagu eedaynayo inay ka leexatay nidaamkii markii hore lagu soo dhisay, isla markaana ay ka baxday ballan-qaadyo badan oo ay samaysay.
Wali warbaahinta maxalliga ah umay suurtogelin inay hesho waraaqaha ay odayaasha iyo waxgaradku ku dalbadeen ogolaanshaha isku-soo baxa, hase yeeshee laba toddobaad ka hor ayey waxgaradku iskugu soo baxeen dariiqyada Magaalada Jigjiga oo ay socod ku mareen.
DAAWO: Xasuuq Uu Amarkiisa Bixiyey Cabdi Ilay Oo Markhaatiyadiisii Warbaahinta Ka Hadleen Iyo Qaabka Naxdinta Leh Ee Xasuuqa Loogu Fuliyey 21 Nin Oo Dembi
Warka ayaa waxa uu intaa ku daray in Madaxweyne Mustafe uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu u baajin lahaa mudaharaadka salmiga ah ee laga qaban qaabinayo caasimadda, waxaana uu u yeedhay qaar ka mid ah odayaasha oo uu ka dalbaday inay joojiyaan mudaharaadka, hase yeeshee ay ku gacan saydheen.
Laamaha ammaanka ayaam wali wax jawaab ah ka siinin odayaasha dalabkooda, waxaana ay marka horeba codsigooda hordhigeen milateriga maadaama ay rumaysan yihiin in booliska iyo ciidamada Liyuu Boolisku ay madaxtooyadu ku amri doonto in aanay ogolaanin wax iskusoo-bax ah.
Maalintii Khamiistii ayaa haweenka deegaanku ay iskugu yimaaddeen magaalada Jigjiga, waxaana bayaan ay kasoo saareen kulankooda ay ku cambaareeyeen xukuumadda oo ay tilmaameen in ay jiho qaldan u socoto, isla markaana ay ka baxday ballan-qaadyo badan oo uu madaxweynuhu fagaareyaal kaga dhawaaqay xilligii uu xilka qabtay.
Waxa kale oo jira shir weyn oo ay iskugu imanayaan Beesha Jidwaaq oo dhamaadka bishan loo qorsheeyey inuu ka dhaco duleedka Jigjiga, kaas oo isaguna sas ku abuuray Madaxtooyada.
Haddaba, maxay salka ku hayaan arrimahani?
Madaxweynaha Dawladda Deegaanka, Mustafe Cagjar ayaa oo sannadkii labaad ee uu xilka hayo uu dhawaan u bilaabmay ayaa waxa uu sameeyey ballan-qaadyo uu horraantii ku kasbaday quluubta bulshada dhibaatada badan uu u geystay madaxweynihii hore ee Cabdi Ilay, kuwaas oo ay ka mid yihiin inuu dib gacanta bulshada ugu soo celin doono dhulkii xoogga lagaga qaatay ee shaqsiyaadka kale la siiyey, taas oo aan wali fulin, una muuqata in uu ka laabtay.
Waxa kale oo dadka kiciyey inay u muuqatay in Madaxtooyadu ay bilaabayso nidaamkii Cabdi Ilay ee ahaa dibu-curasho oo ka dhigan in qofna aanu waxba ka noqonin deegaankii uu kasoo jeeday balse la geeyo meel kale si qabyaaladda loo yaraayo, taasina waxay hoos u dhigtay waxqabadkii maadaama ay ahayd in masuul kastaa uu maamulo deegaankiisa sida Mayarada, guddoomiyeyaasha gobollada, degmooyinka iyo shaqooyinka hoose ee heer deegaan ahba.
Waxyaabaha kale ee ay dadku tirsanayaan waxa ka mid ah in saamiga shacabka aan si fiican loo qaybinin oo sad-bursiimo badan ay jirto, taasina ay tahay wax ay ka dhiidhiyayaan.
Tabashada kale ee dhawaanahan soo baxday ee ay dadku sida xun u dhibsadeen ayaa ah in dawladdu ay dacaayadaynayso haldoorka kalsoonida badan shacabka ka haysta, iyadoo ujeeddada madaxtooyadu leedahay tahay inay ka shakisan tahay inuu ku jiro damac siyaasadeed oo ah inay xilka kula tartamaan Madaxweyne Cagjar.